eTurboNews waa magac aad u xun oo summeedka: Waa kan sababta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » eTurboNews waa magac aad u xun oo summeedka: Waa kan sababta
Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • LGBTQ • Shirarka • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Is-bahaysiga • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Khamriga & Ruuxa • Wtn
eTurboNews waa magac laga cabsado calaamadaynta. Taariikhda daabacaadda hormuudka ah ee caalamiga ah ee lagu beegsanayo warshadaha safarka, qaab nololeedka, iyo xuquuqul insaanka waa mid gaar ah waxayna ka bilaabatay Indonesia.
1999-2001, DMC Waxyaabo Wanaagsan oo Dhiig ah oo ay hogaaminayaan Juergen Steinmetz iyo Melanie Webster ayaa matalay Dalxiiska Indonesia ee Maraykanka iyo Kanada.
Tani waxaa si wadajir ah loo agaasimay wasiirkii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska ee Indonesia, twaxa uu ku geeriyooday Hon. Ardika oo ka yimid Bali.
Mid ka mid ah caqabadaha waagaas ayaa ahaa mid siyaasadeed oo ka dhashay digniino uu Maraykanku u diray Jamhuuriyadda Indonesia.
Sannadkii 2000, xafladdii dalxiiska ee TIME ee Jakarta, Juergen Steinmetz waxa la guddoonsiiyey billad uu ku mutaystay guulihii gaarka ahaa ee Dalxiiska Indonesia oo uu guddoonsiiyey Madaxweynaha Indonesia xaflad ballaadhan oo ka dhacday Plaza Indonesia.
Xiligaas hay’adaha dawliga ah ma aamini jirin kuwa gaarka loo leeyahay, kuwa gaarka loo leeyahayna ma aamini jirin dowladda. Waxyaalo Wanaagsan oo Dhiig leh ayaa bilaabay Golaha Indooniisiya ee Iskaashatada Dalxiiska si ay isu keenaan warshadaha.
ICTP waxay raadinaysay hab kharash-ku-ool ah oo ay wax uga qabato wakaaladaha socdaalka ee Maraykanka si ay qaybta wax uga barato juqraafiga Indonesia. Tani waxay ahayd lama huraan si loo helo fariinta ah in dhibaatooyinka Jakarta aysan saameynaynin dalxiiska Bali tusaale ahaan.
Internetku wuxuu ku jiray da'da dhallaanka, laakiin badi wakiilada socdaalku waxay hore u haysteen iimaylo, qaarna waxay lahaayeen shabakado.
Juergen Steinmetz waxa uu la midoobay Huteelada eTurbo ee fadhigeedu yahay Singapore isaga oo kafaala qaadaya waxa uuna bilaabay warsidaha socdaalka caalamiga ah ee ugu horeeyay isaga oo isticmaalaya qaabka kooxda Yahoo. Waa la odhan jiray eTurboNews, aqoonsiga kafaala qaadka.
eTurboHotels waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee nooca Expedia ah. Waxay lahaayeen shabakado badan sida sheraton.id ama hilton.id waxayna soo bandhigeen inay dhistaan ​​degel bilaash ah shirkadaha safarka ee Indonesia. Qaabka lacag ururintu waxa uu ahaa in lagu dalaco komishanka boosaska intarneedka.
Iyadoo gacan laga helayo warshadaha safarka iyo dalxiiska Indonesia, tani eTurboNews Kooxda Yahoo ayaa si degdeg ah u kortay.
Kooxaha kale, sida Kooxda dooda Dalxiiska ee ASEAN ee saamaynta leh, waxay isu keeneen hogaamiyayaasha qaybaha gaarka ah iyo kuwa guud ee wadamada ASEAN si ay uga wada hadlaan iskaashiga dalxiiska. Qaar badan oo ka mid ah qabanqaabada hadda ee gudaha dalxiiska ASEAN ayaa bilaabay doodan.
Kooxda Hawaay Talk Group waxay noqotay fursad xayaysiis la'aan ah wakiilada socdaalka si ay ula xidhiidhaan huteelada iyo alaab-qeybiyeyaasha kale ee Hawaii ku salaysan oo ay is dhaafsadaan fikrado, ammaan, iyo dhaleecayn. Sannadkii 2002dii eTurboNews, ayuu yiri Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) in qolalka lagu sheekeysto ee Internetka aysan mustaqbal badan lahayn, mana ka fiirsanayaan inay kafaala-qaadaan doodahaas.
Dhanka kale, eTurboNews bilaabay dhowr baloog oo caan ah oo ay ku jiraan Kulamo, Duulista, Wines, GayTourism, TravelIndustryDeals, WorldTourismWire, iyo HawaiiNews.Online lagu bogaadiyay kanaalada warbaahinta bulshada ee u gaarka ah.
eTurboNews Isku-dubbaridka ayaa ku fiday adduunka oo dhan, waxaana maqaallada lagu arki karaa lagu daabacay Hindustan Times ee Hindiya iyo kuwo kale oo badan.
eTurboNews noqday qalab cusub oo loogu talagalay safarka iyo macluumaadka dalxiiska oo si degdeg ah ugu koray gobollada kale ee adduunka. eTurboNews Beddelay qaabkii kooxda Yahoo una beddeleen qaabab kale oo iimaylo badan ah, waxay ka madax bannaanaadeen Indonesia 2001, waxaana la bilaabay warbaahintii ugu horreysay ee si buuxda u madaxbannaan oo dhinaca safarka iyo dalxiiska ah.
22 sano kadib, eTurboNews wali waxay ku hadhsan tahay inay noqoto heshiiska dhabta ah.
eTurboNews wuxuu ahaa warsidaha caalamiga ah ee ugu horreeyay ee la daabacay saacad kasta 24/7. Waa siliga wararka ee madax banaan iyo kan caalamiga ah ee socdaalka iyo dalxiiska oo leh nuxur fikradeed oo kaliya ayaa laga heli karaa eTN.
Iyadoo 230,000+ macaamiisha iimaylka ganacsiga safarka ah, qaybinta iimaylka hadda waa 10% kaliya akhristayaasha guud.
Isku dhafka wararka oo ay ku jiraan Google iyo Bing News, Breaking News, warbaahinta bulshada, iyo ogeysiisyada riixitaanka ayaa kordhiyey muuqaalka eTurboNews si weyn sannadihii la soo dhaafay.
Sannad ka hor, Hawaii waxay xarunteedu tahay eTurboNews la aasaasay 92 mareegaha madax-bannaan oo leh qiimeyntooda iyo SEO si kor loogu qaado waxa ku jira 92 luqadood oo adduunka oo dhan ah. Isbaanish, Jarmal, Faransiis, Shiine, Carabi, Hindi, Sawaaxili, Boortaqiis, iyo Talyaani ayaa hadda ah kuwa ugu horreeya ee akhristayaasha aan Ingiriisiga ahayn.
Iyadoo in ka badan 2 milyan oo akhristayaasha u gaarka ah Maraykanka ay furan yihiin eTurboNews Maqaallada, Maraykanka ayaa ilaa hadda ah dhagaystayaasha ugu badan, waxaana ku xiga UK, Germany, India, iyo Canada.
Hadda, eTurboNews waxaa lagu arkay 238 wadan iyo dhulal. Dhulka ugu yar waxa uu ku yaalaa Antarctica oo leh hal akhriye, lamana garanayo qofkan akhriyaha ah.
Magaalooyinka ugu waaweyn halkaas eTurboNews Waxaa laga heli karaa Frankfurt, Washington, London, New York, iyo Duesseldorf.
eTurboNews waa xubin muhiim u ah ururka Guddiga Dalxiiska Afrika, ka Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska, Iyo Shabakada Dalxiiska Adduunka, oo aasaasay madax-bannaanida Ururka Dalxiiska Hawaii iyada oo laga jawaabayo kooxdii hore ee Hawaii Talk Yahoo.
eTurboNews waxay ku sii sugnaan doontaa Honolulu, Hawaii, USA, iyadoo hawl-gal madax-banaani ka socoto Duesseldorf, Germany, iyo qorayaal madax-bannaan oo jooga 128 waddan.
eTurboNews ayaa weli ah hogaamiye aan muran lahayn oo safka hore kaga jira warbixinta madaxa banaan ee socdaalka iyo warshadaha dalxiiska caalamiga ah, taabashada qaab nololeedka, moodada, xuquuqul insaanka, iyo waxyaabo kale oo xiiso leh.
Markii COVID-19 uu weeraray adduunka dalxiiska, eTurboNews oo ay weheliyaan PATA, Guddiga Dalxiiska ee Nepal, iyo Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa aasaasay Dib-u-dhiska.rajo kooxda bishii Maarso 2020 iyada oo dhinac socota bandhigga ganacsiga ITB ee la joojiyay ee Berlin, Jarmalka.
Kooxdani waxay u soo baxday Shabakada Dalxiiska Adduunka Xubnaha ku leh hadda 128 waddan.
Ka dib 257 doodo zoom caan ah, eTurboNews iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxa ay ku guulaysatay in ay ilaashato dalxiiska iyo dalxiiska iyo madaxdeeda midaysan oo la hawl galiyo.
Iyadoo Livestream, eTurboNews bilaabay 24/7 ugu horeysay channel wararka video caalamiga ah, the War Deg Deg Ah, iyo eTV. Akhristayaashu waxay arki karaan fiidiyowyada eTN iyo doodaha waqtiga-dhabta ah ee dhammaan ku wada socda eTurboNews mareegaha internetka, shuraakada isbahaysiga, iyo daraasiin goobood.
Tan waxaa lagu kabay xulashada eTN Podcast-ka ballaaran. Maqaal kasta oo cusub eTurboNews hadda waa la akhrin karaa, loo dhegaysan karaa sidii podcast, oo loo daawan karaa muuqaal ahaan eTN YouTube Channel iyo odhufto ee la yaqaan.
Wadamo iyo Degaano halkay eTurboNews waa la arkay:
Boqortooyada Ingiriiska: 217,861
Koonfur Afrika: 54,047
Kuuriyada Koonfureed: 10,887
Sacuudi Carabiya: 8,921
Jamhuuriyadda Dominican: 1,734
Waqooyiga Macedonia: 1,660
Jasiiradaha Virgin ee Maraykanka: 718
Jasiiradaha Cayman: 659
Jasiiradaha Sulaymaan: 477
Koonfurta Suudaan: 396
Dib u midoobid: 292
Turki & Caicos: 276
Jasiiradaha Biritishka: 196
Kariibiyaanka Netherlands: 149
Faransiis Faransiis: 145
Ameerikaanka Samoa: 93
Jasiiradaha Waqooyiga Mariana: 57
Jasiiradaha Faroe: 48
Faransiiska Guiana: 33
Jasiiradaha Cook: 30
Afrikada Dhexe: 29
Jasiiradda Man: 16
Jasiiradaha Marshall: 16
Saxaraha Galbeed: 14
Jasiiradaha Falkland: 11
Jasiiradaha Aland: 5
Dhulka Badweynta Hindiya ee Ingiriiska: 3
Waqooyiga Kuuriya: 3
Jasiiradaha Norfolk: 2
Magaalooyinka ugu waaweyn halkaas eTurboNews waa la arkay:
Newcastle ee Tyne: 19,326
Portland, AMA: 12,923
Magaalada Quezon: 11,126
Magaalada Cape Town: 10,131
Magaalada Kansas, MO: 8,848
Magaalada Salt Lake, UT: 6,682
Oomaha, NE: 6,210
Magaalada Cebu: 5,633
Villa ku Conde: 5,049
Magaalada Oklahoma, OK: 4,830
Xeebta Virginia, VA: 4,790
Dhanka kale, TX: 4,518
Xeebta Ewa, HI 2,914
Magaalada Ho Chi Minh: 2,869
Xeebta Myrtle: 2,857
Dhagaxa yar, AR: 2,483
Boise, aqoonsiga: 2,335
Eugene, AMA: 2,098
Magaalada Jersey, NJ: 2,065
Buurta Spring: 1,832
View Mountain: 1,705
Magaalada Mexico: 1,661
Bay Montego: 1,632
Kulliyadda Gobolka: 1,519
eTurboNews waa qayb ka mid ah TravelNewsGroup. Tirokoobyo badan oo la gaari karo eTurboNews waxaa laga heli karaa Travelnewsgroup.com/reach.